Economics | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
December 5, 2017 · 2:55 pm
ရာသီဥတုအပူ၊ အေနာက္ မ႐ႈႏိုင္မကယ္ႏိုင္ရင္ အေရွ႕ ကူမလား
(ဓာတ္ပံု – SCMP)
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဘြန္းၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲဟာ တကယ္ အလုပ္ျဖစ္မယ့္ ကိစၥ နည္းနည္းေလာက္နဲ႔ပဲ ပြဲၿပီးသြားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ပိုလန္မွာ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပရွိ ဘယ္ၿမိဳ႕ေတြမွာပဲ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို က်င္းပသည္ျဖစ္ေစ တကယ္အေျဖက အေနာက္က လာပါ့မလား။ အေရွ႕ကေရာ မလာႏိုင္ဘူးလား။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ရလဒ္ကို အေနာက္နဲ႔ အေရွ႕ ဘယ္အျခမ္းမွာ ပိုၿပီး ရင္ဆိုင္လာေနရသလဲ။
ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဟာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ထည့္မတြက္တဲ့ စီးပြားေရး မိုဒယ္ရဲ႕ ထင္မထားတဲ့ အက်ိဳးဆက္ နမူနာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိႏၵဴျမစ္ဝွမ္းလို အာရွေဒသ တခ်ိဳ႕ဟာ ၂၁၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ လူေနလို႔ မရေအာင္ ပူေလာင္လိမ့္မယ္လို႔ ေဟာကိန္းထုတ္ထားတာ ရွိပါတယ္။
ႀကီးမားတဲ့ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ႀကီးေတြဟာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ရင္ဆိုင္ေနရပါၿပီ။ ဘံုသယံဇာတေတြ ျဖစ္တဲ့ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာေတြဟာလည္း အလြန္အကြ်ံသံုးစြဲၿပီး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဟာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ထိခိုက္ေစၿပီး သန္းရာခ်ီတဲ့ ကမာၻ႔လူသားေတြအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ျပႆနာကို ျဖစ္ေစမွာပါ။
Filed under Article, Ecology, Economics, Environment
Tagged as Article, Ecology, Economics, Environment
ေက်ာင္းတက္ေနတုန္းက စာအုပ္ေတြ ေမႊရင္း လန္ဒန္ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္က ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ လွျမင့္ ဆိုတဲ့အမည္ သြားေတြ႔ေတာ့ သူ႔အေၾကာင္း လိုက္ရွာၾကည့္ဖူးတယ္။
အတၳဳပၸတၱိ အခ်က္အလက္ သိပ္ရွာမေတြ႔ဘူး … ရသေလာက္ စာ ၂ ေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔စာအုပ္စာရင္းကို ၂၀၁၀ မွာ ျမန္မာဝီကီပီဒီးယား ေပၚမွာ ေရးတင္ေပးခဲ့ပါတယ္။
မေန႔ညက ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ လွျမင့္ ကြယ္လြန္သြားပါၿပီ။ ခနေနရင္ ျမန္မာ ဝီကီမွာ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းစြာ ထပ္ျဖည့္ လိုက္ပါမယ္။
Filed under Economics, Myanmar, Wikipedia
Tagged as Economics, Wikipedia
January 7, 2010 · 12:56 pm
“Laissez-faire, Laissez-passer” ဟူသော စကားလုံးမှာ မူလက ပြင်သစ် လယ်ယာမြေဝါဒီ physiocrats များ၏ အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့က လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးရေးသည် တိုင်းပြည်ဥစ္စာဓနကို ဖြစ်စေသည်။ လက်ဝါးကြီးအုပ်ဈေးကွက် မဖြစ်ပေါ်ရန် ကာကွယ်ခြင်းမှတပါး အစိုးရများသည် စီးပွားရေးကို လွတ်လပ်စွာ ထားရမည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ၄င်းတို့၏ စီးပွားရေးလွတ်လပ်မှုကို ကျမ်းရိုးတို့က အပြည့်အဝထောက်ခံခဲ့သည်။ ကျမ်းရိုးဂိုဏ်းကို အစပျိုးခဲ့သော Adam Smith က “ပုဂ္ဂလိကပြည်သူတို့အား ၄င်းတို့ပိုင် အရင်းအနှီးကို မည်သို့အသုံးချရမည်ဟုဆိုသော နိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်များသည် မလိုအပ်သည်ကို အပင်ပန်းခံနေခြင်းဖြစ်ပြီး မည်သူ့တွင်မျှ လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိသည်ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသယောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသယောင် ကြောက်မက်ဖွယ် အန္တရာယ်ပြုနေကြခြင်းဖြစ်သည်” ဟု Wealth of Nations, Book IV, Chapter2တွင် ဆိုထားသည်။
*စီးပွားရေးပညာ အဘိဓာန် – ဦးကြည်မြင့်။ နှာ – ၂၁၄-၂၁၅
(သူငယ်ချင်းက မေးတာနဲ့ သူ့အတွက် ရှာပေးရင်း တင်လိုက်တယ်။)
December 31, 2009 · 2:58 pm
Attahi Attano Nahto Adam Smith
Attahi Attano Nahto Adam Smith by Dr. Mg Mg Soe. Living Color Magazine, June 2005, Pg 151-153.
Dr. Maung Maung Soe (Eco)
Pls click on page to enlarge.
Tagged as Development, Economics
Economic Reform and Economic Policy
စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် စီးပွားရေးပေါ်လစီ (မူဝါဒ)
(Economic Reform and Economic Policy)
ဒေါက်တာအောင်ကိုကို (စီးပွားရေးပညာ၊ စီးပွားရေးပေါ်လစီ)
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင် နိုင်ငံအတော်များများသည် လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို အချိန်မီ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို လုပ်ကြရပါသည်။ တနည်းဆိုရသော် နိုင်ငံ၌ လက်ရှိစီးပွားရေး၏ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များနှင့် အနာဂတ်အလားအလာများကို ပြန်လည် ခွဲစိတ်သုံးသပ်ပြီး ယင်းကို ပုံဏ္ဍန်အသစ်များဖြင့် ပုံဖော်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊ နိစ္စဓူဝ ပြောင်းလဲလာသော လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေများကို လက်တွေ့ကျကျ ပြန်လည် သရုပ်ဖော်ခြင်းဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။
စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးသည် အပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေတတ်ပြီးစီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုဖြစ်လျှင် နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သလို နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုဖြစ်လျှင်လည်း စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးကိုမည်သို့တည်ငြိမ်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုသည်ကို အမြဲတမ်းပြောဆိုဆွေးနွေးကြလေ့ရှိကြပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကို နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဖြင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုများကို စီးပွားရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများဖြင့်လည်းကောင်း ပြန်လည်ပြုပြင်ရလေ့ရှိပါသည်။ ယင်းတို့ကို နှစ်ခုလုံးတွဲဖက်၍လည်းကောင်း၊ တစ်ခုစီသီးသန့်ခွဲ၍လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်လေ့လည်းရှိပါသည်။
ယင်းကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ စီးပွားရေးပေါ်လစီတိုင်းသည် Efficiency (သက်ရောက်အကျိုးရှိမှု) အရှိဆုံးဖြစ်ရန်နှင့် မက်ခရိုစီးပွားရေး (Macro Economy) ၏ တည်ငြိမ်သောတိုးတက်မှုရှိစေရန်အတွက် Equity (သာတူညီမျှရှိမှု) ရှိရန်လည်းလိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု (Productivity) လည်းတိုးမြင့်လာပြီး တည်ငြိမ်သော စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို ဖော်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
Filed under Article, Economics
Tagged as Article, Economics